Phelisa ukungazithembi ngezi ngcebiso zintathu zokwenza ukhetho olufanelekileyo - Impilo
Eyona Impilo Ngaba ufuna ukwenza isigqibo esibuhlungu malunga noBomi / uthando / umsebenzi? Funda oku kuqala.
Ngaba ufuna ukwenza isigqibo esibuhlungu malunga noBomi / uthando / umsebenzi? Funda oku kuqala.
Akukho zigqibo zichanekileyo nezingalunganga.I-Unsplash / Ilanga lentombazana
Ndinexhala lokwenza isigqibo esingalunganga. Ndikhubazekile luloyiko-ndinoxinzelelo olukhulu. Ungathini xa ukhetha ngendlela engeyiyo? What if ndiyazisola ubomi bam bonke? ubuza umthengi wam ophumeleleyo kwi-uber, ogqibeleleyo.
Awunakho ukwenza isigqibo esingalunganga. Unokwenza isigqibo esahlukileyo kuphela.
Izigqibo ezichanekileyo nezingalunganga azikho; kukho izigqibo ezahlukeneyo kuphela. Zonke izigqibo ebomini zikhokelela kumava. Ngokuqinisekileyo, amanye ala mava anokuziva engcono kunamanye, kodwa akukho nanye alunge ngokwendalo. Bakuseta nje kwiindlela ezahlukeneyo.
Ingenzeka njani loo nto? Ndenze izigqibo ezimbi kakhulu kwaye ndafumana iziphumo, utshilo.
Ndiyaphendula, ndixelela abantu ukuba elona xesha lilungileyo lobomi babo lelona linzima kuba likhokelela ekukhuleni. Into onokucinga ukuba yenye yezona zinto uzikhethileyo- umzekelo ukutshata umntu owawusakuba ngumlingane wakho — ndingathi yenye yezona zilungileyo.
Kodwa ndangcungcuthekiswa kulomtshato, utsho.
Obo budlelwane bukufundise into ongasokuze uphinde uyenze. Uzilahlekisile kulomtshato. Uzikhanyele iimfuno zakho, wamkela ukuphathwa gadalala ngamazwi nangokweemvakalelo, wavumela ukungathembeki, kwaye wamkela ngaphantsi kokufaneleyo, ndamkhumbuza. Kodwa jonga apho ikuzise khona: Awusoze uphinde wenze olo hlobo lwesigqibo kwakhona. Ngoku unikwe amandla, ke wenza ukhetho olungcono. Kwafuneka uphile ebubini ukuze uzizisele okuhle.
Isigqibo esibi sinokukuzisa kwindawo ephezulu emva koko isigqibo esifanelekileyo.
Unokucinga ukuba uthathe isigqibo esingalunganga, kodwa ukuba uyakhula kweso sigqibo, emva koko uyithomalalisile ifuthe laso. Okubaluleke ngakumbi, uyaqonda ukuba izigqibo ezingalunganga ziyakwazi ukukuzisa kwindawo ebhetele kakhulu, enye enokukhetha okungcono.
Akukho sigqibo sibaluleke njengale uyenzayo emva kokuba senziwe.
Izigqibo zakho zibalulekile, kodwa azibalulekanga njengokuhamba kwakho okulandelayo, ndiyamxelela.
Ke uthi andinakuthatha sigqibo siphosakeleyo kuba isigqibo sisiqalo sendlela? Kwaye ukuba ndifunda kukhetho 'olubi', ngaba ukhetho olungcono luya kubakho? Ubuza watsho.
Ewe. Xa ufunda kwezigqibo ezimbi, uya kuvuzwa ngabantu abakumgangatho ophezulu kunye neemeko, ndiyamxelela. Akukaze kube malunga nesigqibo; imalunga nento oyenzayo neso sigqibo esimisela amava akho alandelayo.
Kuthekani ukuba ndiziva ngathi ndithathe isigqibo esifanelekileyo kwaye ndonwabile ngaso? Ubuza watsho.
Ukuba wonwabile ngesigqibo sakho, qhubeka kuloo ndlela de kube kungasaziva ugcwaliseka, emva koko ukhethe kwakhona. Ukuba awonwabanga sisigqibo sakho, sukuhlala apho. Yenza esinye isigqibo. Khumbula ukuba ayisosigqibo ngqo esibalulekileyo; yinto oyenzayo ngayo. Ukuba uvele uthathe isigqibo sakho 'esibi', imeko yakho ayinakuze itshintshe. Kodwa ukuba uyazi ukuba uhlala unikwe amandla okukhetha kwakhona, ubomi bakho bunokuba ngcono, ndiyamkhumbuza.
Nazi iingcebiso ezintathu zokuqinisekisa ukuba uhlala usenza ezona zigqibo zibalaseleyo:
Yenza into entle. Ngaphakathi ezantsi, uyazi ukuba yeyiphi eyona nto ikulungeleyo. Awusoze uthathe isigqibo esingalunganga ukuba umamele ngokwenyani. Ukuba uziva ulungile, gungqisa. Ukuba ayiziva intle, tshintsha icala.
Sukujonga izigqibo njengeziphumo; zibone njengenxalenye yenkqubo . Sukulindela ukuba izigqibo zakho zibe zezona ziphela zonke. Isigqibo ngasinye osithathayo linyathelo elihamba nenkqubo yobomi bakho. Akukho nto injengokuya khona.
Ungazigwebi ngesigqibo sakho sokwenza izigqibo . Awuzibethi kwivenkile yokutya xa uchola ibhanana elimoshakeleyo. Uyibeka phantsi uchola eyahlukileyo. Ubomi buyaqhubeka. Kuhlala kukho iibhanana ezininzi.
Isekwe kwisiXeko saseNew York, iDonnalynn yifayile ye- Umbhali we Izifundo zoBomi, yonke into owakha wanqwenela ukuba uyifunde kwisikolo sabantwana abancinci. Ukwangumqeqeshi wobomi oQinisekisiweyo woBomi, iBlogger ekhuthazayo ( isiseko.wordpress.com ), umbhali kunye nesithethi. Umsebenzi wakhe ubonakalisiwe Ubuhle , iHeart Radio Network kunye nePrinceton Television. Iwebsite yakhe yile elelifa-family.com . Ungamlandela Twitter , I-Instagram , Unxibelelaniso , Facebook kwaye UGoogle +.
I-Pearl Jam Isenze sathandana kwakhona eMadison Square Garden
'Mr. Robot 'Ukuphindaphinda 2 × 09: Molo, Ollie
Umbhalo opheleleyo weNtetho yoHlahlo-lwabiwo mali luka-Christie kwiNdlu yowiso-mthetho yaseNew Jersey
izinto ezibaluleke kakhulu ukuzazi
idola yokucheba iklabhu yezokhuseleko
indawo yasimahla yokungena e-usa
ndingathumela ifeksi nge-gmail
jonga iinombolo zefowuni zasimahla ezinegama